myanmarwikileaks: လျှို့ ဝှက်တည်ဆောက်နေတဲ့ မြန်မာနျူကလီးယားစီမံကိန်း အသေးစိတ် (Wikileaks)
လျှို့ ဝှက်တည်ဆောက်နေတဲ့ မြန်မာနျူကလီးယားစီမံကိန်း အသေးစိတ် (Wikileaks)
မြန်မာစံတော် ချိန် နံနက် ၅း၂၀ မိနစ် အချိန် Wikileaks ကနေ ထပ်မံပေါက်ထွက်လာတဲ့ အမေရိကန် သံရုံး ကြေးနန်း ရှစ်ခု မှာ တော့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ရဲ့ နျူကလီးယား အစီအစဉ် ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ကြေးနန်း ကို ဂါးဒီယန်း သတင်းစာ မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီကြေးနန်း ရှစ်ခုထဲက တစ်ခုမှာ မြန်မာအတိုက်အခံတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်း နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံ အမတ်ကြီး ကလည်း ကုလ သံ နဲ့ညစာစားပွဲ မှာ ထိုင်းက မြန်မာအတိုက်အခံတွေဟာ ပိုးသာကုန် မောင်ပုန်စောင်းမတတ် ဖြစ်နေပြီ လို့ ဆိုထားတာကို Embassy of Bangkok leak က ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ ကြေးနန်းတစ်ခုမှာတော့ တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သည်းမခံ နိုင်တော့တာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ တရုတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးအတွက် အားမရဘဲ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဗိုလ်သန်းရွှေကလုပ်နေတာဟာ စိတ်ကုန်စရာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ဆက်လက်သည်းမခံနိုင်အောင်ကို ဖြစ်နေကြောင်းကို ဝီကီလိခ်သတင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်နေ့နေစွဲနှင့် တင်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကျားကန်ရပ်တည်ပေးခဲ့သော်လည်း မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ တစုံတရာပြောင်းလဲမှုမျိုး ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလည်းမှု လို့ ဆိုရတဲ့ အရိပ်အယောင်တစ်ခုမျှ တွေမြင့်လာရခြင်းမရှိကြောင်းကို တရုတ်သံအမတ်က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ အသိဥာဏ်ခေါင်းပါးလှပြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေဟာ လက်ခံနိုင်မှုမရှိအကျိုးမရှိဘဲ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအာဏာပျောက်ဆုံးလာပြီး တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေး စားပွဲဝိုင်းကို ဝေးဝေးရှောင်နေကြောင်း တရုပ်ဘက်ကစိတ်ပျက်မှုများကို ဝီကီလိခ်စာမျက်နှာတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
ဒီတစ်ခါ ၀ီကီလိခ်ပေါက်ကြားမှု မှ တရုတ်အစိုးက မြန်မာစစ်အစိုးရကို အပြစ်တင်ထားပြီး အမေရိကန်သံတမန်ကတော့ မြန်မာအတိုက်အခံတွေကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ထားတာ တွေ့ ရမှာပါ။
မူရင်းကြေးနန်း (၁) ညူကလီယား လက်နက် ထုတ်လပ်သည့် အဆောက်အဦမြောက်ကို ရီယားတည်ဆောက်ပေး
မူရင်းကြေးနန်း (၂ )(သင်္ဘော ကျင်း နှင့် မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘော)
မူရင်ကြေးနန်း (၃) (မြောက်ကိုရီးယား မြန်မာ ညူလက် နက် အတွက် နည်းပညာကူညီ)
မူရင်းကြေးနန်း (၄) နည်းပညာ
မူရင်းကြေးနန်း (၅) ယူရေနီယံ နှင့် လောင်စာ
မူရင်း ကြေးနန်း (၆) မြန်မာ ကို တရုတ် က သည်းမခံ နိုင်တော့ (တရုတ် သံအမတ်ကြီး)
မူရင်းကြေးနန်း (၇) (ဘိုးဘွား ရိပ်သာလို ဖြစ်နေသည့် NLD အလုပ် မဖြစ်တော့)
Posted by မြန်မာ ၀ီကီလိခ် at 6:18 AM
မြန်မာ ၀ီကီလိခ်ကို နှစ် ၉၀ ပြည့််အမျိုးသားနေ့ ကျရောက် သည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ တွင် စတင်တည်ထောင်ပါသည်။ အင်တာနက်စာမျက်နှာသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ တွင် စတင်သည်။
မြန်မာဝီကီလိခ် နှင့် ဆက်သွယ်လိုပါက ....
MyanmarWikileaks on FaceBook
နေရွှေသွေးအောင် က ဒု ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နေရာ ကို ယူမည်
ဦးအောင်သောင်း ၏ အာဏာသိမ်းရန်ကြံစည်မှု (အပိုင်း ၂ )
ဘီလျှံနာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ
လာရောက်ပြီး သူ အရေအတွက်
လအလိုက်ဖတ်ရန် May 09 (1) Oct 22 (1) Sep 12 (2) Sep 10 (1) Sep 08 (2) Sep 07 (3) Sep 06 (2) Sep 03 (1) Sep 01 (3) Jun 17 (1) May 06 (1) Apr 05 (1) Apr 04 (5) Mar 18 (1) Mar 16 (3) Feb 11 (2) Jan 18 (1) Jan 06 (2) Dec 31 (3) Dec 28 (3) Dec 21 (2) Dec 18 (1) Dec 16 (2) Dec 15 (3) Dec 14 (1) Dec 13 (1) Dec 12 (1) Dec 11 (1) Dec 10 (2) Dec 09 (1) Dec 08 (3) Dec 07 (3) Dec 06 (1) Dec 05 (3) Dec 04 (4)
အဖွဲ့ ဝင် အဖြစ်ကြည့်ရှုသူ
Copy Right © Myanmar Wikileaks 2010-2011. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.